दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, १७ अर्बको सेयर कारोबार — Sanchar Kendra
१जी-सेभेन देशले चीनलाई चौतर्फी घेरे, चीनले दियो यस्तो कडा चेतावनी
२नारायणी नदीले चेतावनीको तह पनि पार गर्यो, सतर्क रहन आग्रह
३शिल्पी संघ नेपाल- कुवेतको सहयोगमा १६ अशक्तसहित १८ परिवारलाई राहत वितरण, हेर्नुहोस १२ तस्विरमा
४एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे र केसीलाई पठाउने सर्वोच्च बारको निर्णय
५बन्दाबन्दीमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
६थप २७४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४१ को मृत्यु
७ट्यांकर चालकहरूको आन्दोलन फिर्ता, सकारसँग के के भयो सहमति ?
८निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भयो- उपेन्द्र यादव
९नदी किनाराका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
१०यी स्थानहरुमा हुनेछ यो साता भारी बर्षा, सचेत रहन आग्रह
११पाँचतारे होटलमा यस्तो का’ण्ड मच्चाईरहेकी थिइन् अभिनेत्री शाह, प्रहरीले गर्यो पक्राउ
१२नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा खस्यो ढुङ्गा, नदि किनाराका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, १७ अर्बको सेयर कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । दिनभर देखिएको तीव्र उतारचढाव पछि बुधबार नेप्से परिसूच्क १३ दशमलव ५६ अंकले घटेर २ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५८ अंकमा झरेको छ ।
उता क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ दशमलव ८३ अंकले घटेको छ । कारोबार रकममा भने उल्लास कायमै छ । दिनभर भएका १ लाख ५५ हजार २३९ कारोबारबाट २२१ कम्पनीका ३ करोड १३ लाख ५४ हजार २२ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
जसबाट कारोबार रकम १६ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ९२ हजार ७०३ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल इन्स्यारेन्सका लगानीकर्ताहरुले बुधबार धेरै कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
दोस्रोमा युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरक कम्पनी र तेस्रोमा रिढी हाइड्रोपावर कम्पनी देखिएका छन् । यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, सीईडीबी हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, पोखरा फाइनान्स र प्रभु इन्स्यारेन्सको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक ३ हजार नाघ्दा सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
आज घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य २० प्रतिशत घट्यो
तोलामा १५०० ले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?